“အတွေးစလေးတွေ”: နှစ်ဦးကြိုလေပြီ . . .
Posted by Han Kyi at 10:32:00 am
အချိန်ဆိုတာ ရောက်မလာခင်တော့ စောင့်ရတာ ကြာသလိုလိုရှိပေမယ့်
ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေ ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် ထင်တာထက်ကို မြန်ဆန်းလွန်းနေတယ် ဦးဟန်ကြည်ရေ။
လူ့သဘောသဘာဝကိုက တစ်ခါတစ်ရံ အရေးမကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ရေးကြီးခွင့်ကျယ် လုပ်တတ်ကြတယ်လေး) ဒီလိုနဲ့ပဲ လောကလူသားအားလုံးဟာ မွေးဖွားခြင်း အစကနေ သေဆုံးချင်းမှတ်တိုင်ကို ဦးတည်ပြီး တစ်ရွေ့ရွေ့သွားနေကြရတာပါပဲလေ...
ဆုတောင်းပေးဘို့ မေ့သွားလို့ :P
ဟို ဟက်ပီးနယူးယီးထအော်တဲ့ သူတွေနဲ့ အတူတူ အလန့်တကြား ပြူးတူးပြဲတဲ ဘလော့ပေါ် ရောက်လာတယ်ထင်ပါ့။ ဘယ့်နှယ် ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေလိုက်တာ။
ဘလော့လောကကြီးကို ဥပေက္ခာများပြုသွားလေရော့သလား အောက်မေ့ရတယ်။
အင်း.. လာမဲ့ ၂၀၁၃မှာတော့ သူကြီးသားပေါက်ကြီးကို အဆုံးသတ်လောက်ပါရဲ့။ သူ့ခမျာ ဆရာဟန်ကြည်လုပ်လိုက်မှ ဆန့်တငင်ငင်နဲ့ ရွာပြန်ရခက် မြို့တော်မှာ နေဖို့ခက်ခက် ဖြစ်နေရှာတယ်။
နှစ်ဟောင်းစွန့်ပြီး နှစ်သစ်ကူးတာလေးကို အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားလေးတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲပြသွားတာက တကယ့်သံဝေဂရစရာလေးတွေပါ။
အသက်ကြီးလာလို့လားတော့ မသိဘူး။ သံဝေဂတွေ မကြာမကြာဝင်လာမိတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာက မျောက်စိတ်လိုဘဲတဲ့။ ငြိမ်ဖို့ အတော်ခက်တာကလား။.
အဲ... ရေးရင်း ဘယ်တွေ ရောက်သွားကုန်ပါလိမ့်။
အာဝေနိကဒုက္ခတွေ ထုထောင်းချက်ကတော့ ရှိရင်းစွဲအကြည်ဓာတ်ကလေးတွေ ပျောက်ချက်သားကောင်းကုန်လို့ ရေးလက်စပေါက်ကြီး ပို့စ်အဟောင်းကို ပြန်ဖတ်မိရင် ကိုယ်ရေးခဲ့တာမှ ဟုတ်ပါလေစလို့ အံ့သြယူရတယ်...
၂၀၁၃ အတွင်းမှာတော့ ပေါက်ကြီးဇာတ်လမ်း အဆုံးသတ်အောင် ရေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ မရဲတရဲ မျှော်လင့်ရတာပဲဗျာ...
အလိုလေးလေး.......၂၀၁၃နှင့်အတူ ဆရာကြည်တစ်ယောက် ဗျုန်းစားကြီး ကိုယ်ထင်ပြလာပါ
တာလည်း ရ.....လောလောဆယ်တော့ ၂၀၁၃နှစ်သစ်
မှာ ဆရာကြည်တို့ဇနီးမောင်နှံ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
ဒီပို့စ်လေးကို အလွန်သဘောကျတယ် ဆရာဟန်ရေ ... ။
ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေပြီး ပြန်ပေါ်လာတော့လဲ အဖိုးတန် ပို့စ်လေးနဲ့ပေါ့ နော်။
၂၀၁၃ မှာ ဆရာဟန်ရဲ့ စာကောင်းပေမွန်တွေ များများ ဖတ်ရပါလို၏ :)
Happy New Year ပါဆရာ... စာများများရေးပါဦးဗျို့
ဆရာလည်း မတွေ့တာ ကြာ
ပျော်စရာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ဆရာရေ... :)
နှစ်ကုန်၊ နှစ်ကူးလေးကို တရားသဘောနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြပုံလေး သဘောကျတယ် ဆရာရေ။
အန်တီတင့်ပြောသလို မည်သူမဆို ခန္ဓာကိုယ်ကို မမုန်းမချင်းတော့ သံသရာဆုံးနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ခညောင်းပါစေ...
ဆြာဟန် ပျောက်နေတာ ကြာပေါ့..မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ...